Yope Tips | YOPE
Home \_ Yope Tips
Let’s takeaphoto with your phone
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. အခုလို ကျောင်းတွေပိတ် အားလပ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ ဖြစ်စေ၊ တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်စေ နေရာစုံလျှောက်သွားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ ပျော်စရာနော်..အရင်တုန်းကတော့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး.. အခုခေတ်မှာတော့ camera ဆိုတာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာဘဲရှိနေပြီမို့ အချိန်မရွေး ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို အမှတ်တရသိမ်းထားနိုင်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ် YOPE ရဲ့ Insider Tips ကနေပြီးတော့ ဖုန်းကိုသုံးပြီး ကိုယ်တိုင် ရိုက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတစ်ချို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ..
DIY: How to fold the clothes foratrip
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ခရီးသွားခါနီး လိုချင်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေ အကုန်ထည့်မရတာက ခေါင်းရှုပ်စရာတစ်ခုပါ..ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ YOPE insider tips ကနေ ခရီးသွားခါနီး အ၀တ်အစားတွေ ဘယ်လိုခေါက်ထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ချို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.. သူငယ်ချင်းတို့မှာလည်း တခြားနည်းလမ်းလေးတွေရှိရင်ဝေမျှပေးခဲ့ပါဦးနော်..
DIY: What can we do with the papers?
စက္ကူစာရွက်တွေနဲ့ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ? သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ စာရွက်စက္ကူလေးတွေနဲ့ လက်ဆောင်လှလှပစ္စည်းလေးတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီး ပြုလုပ်ကြမလဲ။ ဒီအပတ်မှာတော့ YOPE ရဲ့ Insider Tips ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့မှာရော နည်းလမ်းကောင်းတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဝေမျှပေးခဲ့ပါဦးနော်။
စက္ကူခွက်တွေကို ဘယ်လို အလှဆင်ကြမလဲ?
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စက္ကူခွက်လေးတွေ ရှိမှာပါ။ အဲ့ဒီစက္ကူခွက်လေးတွေကို အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ တင်ဆက်ပေးထားလည်ဆိုတာ သူငယ်ချင်းတို့က video လေးမှာ ကြည့်ပြီး အားပေးပါဦး.. အားလပ်ရက်မှာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်နိုင်မှာပါ.. အရမ်းလွယ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်.. သူငယ်ချင်းတို့မှာကော.. တခြားနည်းလမ်းတွေရှိရင် တခြား သူငယ်ချင်းတွေလဲ သိရအောင် comment လေးပေးသွားနော်..
How to recycle the empty bottles
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. အိမ်မှာ အမြဲတမ်းတမ်းလိုလို အမှိုက်လို ပွနေတတ်တာ ရေသန့်ဗူး ခွံ့တွေပါ. ဒီတော့ ဒီရေသန့်ဗူး ခွံ့တွေကို လွှင့်ပစ်မယ်အစား အခြား ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်.. ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ video လေးမှာ ကြည့်ပြီး အားပေးပါဦး..အားလပ်ရက်မှာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်နိုင်မှာပါ.. အရမ်းလွယ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်.. သူငယ်ချင်းတို့မှာကော.. တခြားနည်းလမ်းတွေရှိရင် တခြား သူငယ်ချင်းတွေလဲ သိရအောင် comment လေးပေးသွားနော်..
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့ Insider tips အတွက် ကိုယ်တိုင် လိုက်လုပ်လို့ရမယ့် နည်းလေးတစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကိုယ့်ဆီမှာ အသုံးမ၀င်တော့တဲ့ အရာတွေကို တခြားဘယ်နေရာမှာ အသုံးဝင်အောင် ဘယ်လိုပြန်ပြုပြင်မလဲ? သူငယ်ချင်းတို့မှာရော .. တခြား idea တွေရှိတယ်ဆိုရင် တခြား သူငယ်ချင်းတွေ သိရအောင် ပြောခဲ့ပါဦး..
Yope | Crazy Stuff, Yope Tips |0Comments
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီတစ်ပတ် အတွက် Insider tips လာပါပြီ.. အသုံးစရိတ်တွေများလွန်းလှတဲ့ ကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးမှာ အပိုစုငွေစုဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလှပါတယ်.. ဒါကြောင့် ရယ်မောစရာလဲဖြစ် အသုံးလဲ ၀င်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့မှာ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိဦးမှာပါ..အခြားသူငယ်ချင်းတွေ အတုယူရအောင် ကိုယ့်ရဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို ပြောပြခဲ့ပါဦးနော်…